भारतमा बर्षे अधिवेशन शुरु, मिनाक्षी लेखीसहितका १७ सांसदलाई कोरोना संक्रमण ! « MNTVONLINE.COM
भारतमा बर्षे अधिवेशन शुरु, मिनाक्षी लेखीसहितका १७ सांसदलाई कोरोना संक्रमण !
नयाँ दिल्ली । भारतका १७ जना सांसद कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएको पुष्टि गरिएको छ । संघीय संसदको बर्षे अधिवेशन शुरु हुनु अघि परीक्षण गरिएको नतिजा अनुसार उनीहरु सङ्क्रमित भएको सोमबार देखिएको हो ।
सङ्क्रमित भएकाहरुको सूचीमा सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीका प्रभावशाली सांसदहरु मिनाक्षी लेखी, अनन्त कुमार हज्डी र प्रवेश सहिब सिंहलगायत रहेका छन् । भारतको संघीय संसदको बर्षे अधिवेशन सोमबारदेखि शुरु भएको छ । कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण यो अधिवेशन ढिलागरी शुरु गरिएको हो ।
बैठकमा सहभागी हुँदा कोरोनाभाइरसबाट बच्नका लागि अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य सुरक्षाका सवै उपायहरु अपनाउन अनिवार्य गरिएको छ । स्वास्थ्य निर्देशिका अनुसार सामाजिक दुरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, हात धुनेलगायतका उपायहरु अबलम्बन गर्न लगाइएको छ ।
त्यसैगरी सांसदहरुको हाजिरी सोमबार पहिलो दिन एउटा एप मार्फत् गरिएको लोक सभा सचिवायले जनाएको छ । कुनै हाजिरी पुस्तिका वा मेसिनमा हाजिर गर्दा कोरोनाको सङ्क्रमण एक अर्कामा सर्न सक्ने भएकाले एपको प्रयोग गरिएको हो ।
लोकसभाका सांसदहरुले प्रयोग गर्नेगरी एटेन्डेन्स रजिष्टर (उपस्थिति दर्ता) नामक एप बनाइएको र पहिलो दिन पनि प्रयोग गरिएको सचिवालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् । सो एप राष्ट्रिय सूचना केन्द्रले बनाएको हो । सांसदहरु संसद भवनमा उपस्थित भएपछि सचिवालयको सहयोगमा एप मार्फत् उनीहरुको उपस्थिति दर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सभामुख ओम बिर्लाले सवै सांसदहरूलाई स्वागत गर्दै अहिलेको विषेश परिस्थितिलाई ख्याल गर्न सवैलाई आह्वान गरेका थिए । त्यसैगरी कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिनका लागि तय गरिएको निर्देशिका तथा मापदण्डहरु पालना गर्न पनि उनले सवैलाई अपिल गरेका थिए ।
“यो अधिवेशन विषेश परिस्थितिका साथ शुरु गरिएको छ, सुरक्षा सावधानी हामी सवैले अपनाउन आवश्यक छ, सावधानीका साथ अधिवेशनलाई अगाडि बढाइनेछ,” सभामुख बिर्लाले भने । बैठक बुधबार ३ बजे दिउसो बस्नेगरी स्थगित भएको छ ।
चेल्सीका क्रिस्टेन्सन बार्सिलोनामा
असार २१, काठमाडौँ । स्पेनिस ला लिगा क्लब बार्सिलोनाले फ्रि–ट्रान्सफरमा इंग्लिस क्लब चेल्सीका डेनिस डिफेन्डर एन्ड्रिएस क्रिस्टेन्सेनलाई चार वर्षको लागि अनुबन्धित गरेको छ।२६ वर्षीय सेन्टर
थप अप्ठ्यारोमा बाबुराम भट्टराई
पानी तान्ने मोटरबाट करेन्ट लागेर एक वृद्धको मृत्यु
डेनिस सपिङ मल गोलाबारीका संदिग्धमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याः प्रहरी
कुकुरले टोकेको झोंकमा दिल्लीका एक व्यक्तिले मालिकलाई रडले रामधुलाई गरेपछि..!
४० विद्यार्थी सवार बस खोंचमा खस्यो, १६ जनाको मृत्यु
कोपेनहेगनको सपिङ मलमा गोली चल्यो, तीन जनाको मृत्यु
श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कट थप जटिल बन्दै, इन्धन भण्डारण ‘खालि भएको’ सरकारको दावी
उत्तर कोरियाद्वारा त्रिपक्षीय सैन्य सहयोगको कडा आलोचना